China Ihe Ibe Okpukpu Uzo Okpukpo Osisi Nkeji abuo ya na ndi eji eme ya | 品牌 名 / 公司 名
Mpempe ọkụ na-ekpo ọkụ nke okpukpu abụọ nwere nhazi
Raw ihe: Akwado Ihe + Wax + Aluminom Foil + Plastic Film + akara Film
Ihe eji akwado ihe: Pulp board ma ọ bụ gbasaa polyethylene (EPE)
Ihe akara: PS, PP, PET, EVOH or Pee
Ọkpụrụkpụ ọkọlọtọ: 0.2-1.7mm
Standard dayameta: 9-182mm
Anyị na-anabata ahaziri logo, size, nkwakọ ngwaahịa na graphic.
Ngwaahịa anyị nwere ike ịnwụ-ebipụta n'ụdị dị iche na nha dị iche iche.
Okpomoku akara okpomoku: 180 ℃ -250 ℃, na-adabere na ihe nke iko na gburugburu ebe obibi.
Ngwugwu: Akpa rọba - katọn akwụkwọ - pallet
MOQ: 10,000.00 iberibe
Oge Mbuga: Oge nnyefe, n'ime ụbọchị 15-30 nke dabere n'usoro ibu na ndokwa mmepụta.
Mentkwụ gwọ: T / T Telegraphic Nyefee ma ọ bụ L / C Letter nke Ebe E Si Nweta
Aluminom foil bu nke mbu nke oyi akwa alumini.
A na-emechi oyi akwa aluminom na egbugbere ọnụ nke akpa.
A na-ahapụ akwa nke abụọ (kaadiboodu nke ụdị) na okpu.
Adabara maka ịghasa capping PITA, eyi, PS, Pee, akwa mgbochi plastic ọkpọ
Ezigbo akara okpomọkụ.
A obosara okpomọkụ sealing okpomọkụ nso.
Elu àgwà, na-abụghị leakage, mgbochi mgbapu, elu dị ọcha, mfe & ike akara.
Ihe mgbochi nke ikuku na mmiri.
Ogologo oge nkwa.
1. Nnọọ mfe imeghe
2. Akara na ịdị ọhụrụ
3. Gbochie oke onu ahia
4. Belata ihe egwu nke tamper, pilferage, na mmetọ
5. Ghakwuo ndụ
6. Mepụta akara hermetic
7. Gburugburu ebe obibi
Ihe na-emetụta akara akara
Kpọtụrụ obosara nke akara elu: nke buru ibu na kọntaktị obosara n'etiti akara elu na gasket ma ọ bụ mbukota, ogologo ụzọ nke mmiri mmiri na nnukwu ihe nkwụsi ike na-agba ọsọ, nke bara uru iji akara. Agbanyeghị, n'okpuru otu mkpakọ ike, nnukwu obosara kọntaktị ahụ, obere nrụgide a kapịrị ọnụ. Ya mere, a ga-achọta obosara kọntaktị kwesịrị ekwesị dịka ihe nke akara.
Njirimara mmiri: viscosity nke mmiri mmiri nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ akara nke mbukota na gasket. Mmiri ahụ nwere viscosity dị elu dị mfe iji mechie n'ihi enweghị mmiri ya. Viscosity nke mmiri mmiri dị elu karịa nke gas, ya mere mmiri mmiri dị mfe ikpuchi karịa gas. Ugboro zuru oke dị mfe karịa karịa steam n'ihi na ọ ga-asọda ma kpoo ụmụ irighiri mmiri ma gbochie ọwa mmiri ahụ n'etiti ebe akara. Nnukwu ụda olu nke mmiri ahụ, ọ dị mfe iji gbochie ya site na oghere oghere dị warara, ya mere ọ dị mfe ikpuchi. Na wettability nke mmiri mmiri na akara ihe nwekwara ụfọdụ mmetụta na sealing. Mmiri mmiri nke dị mfe ncha dị mfe ihihi n'ihi ihe mkpuchi nke micro pores na gasket na mbukota.
Nke gara aga: Otu ihe mpempe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na ihe nkiri White PE
Osote: Mpempe ọkụ na-ekpo ọkụ nke okpukpu abụọ na mpempe akwụkwọ
Otu-mpempe Okpomọkụ itinye n'ọkwa akara Liner na White ...
Otu-mpempe Okpomọkụ Mmeputa Akara Liner na Ne ...
Mpempe ọkụ na-ekpo ọkụ nke okpukpu abụọ na Akwụkwọ ...